Caafimaadka Dhimirka | albatros-direkt.de
Deutsch Englisch Pусский arabisch - عربي فارسی - farsi ትግርኛ - Tigrinja Հայերեն - armenisch
LA-TALIN LOO SAMEYNAYO QAXOOTIGA
SU'AALO IYO JAWAABO
Podcasts & Seeykoolaji
Baahin ku saabsan Rabshadaha Galmada
Waxaan uga hadli doonnaa waxa uu yahay rabshadda Galmada, iyo tirakoobyada caalamiga ah. Waxaan sidoo kale soo jeedin doonnaa tallaabooyin la qaadi karo si looga kabto culeysaadka maskaxeed iyo shuruucta ka dhalata rabshadda galmada, innagoo sidoo kale kuu soo bandhigi doonna dhowr urur oo caawinaad laga raadsan karo.
Galka soo degso.PDF
YAA AH CILMU-NAFSI YAQAAN?
Baahintan waxay ku saabsan tahay yaa ah Cilmu-nafsi yaqaan ama Seeykoolajiste? Waa maxay farqiga u dhaxeeya Seeykoolajiste iyo Saykateriiste ama dhakhtarka dhimirka? Iyo su’aalo la xiriira, kuwaas oo aan ka bixineyno jawaabo ku saleysan aqoontayada xirfadyahan iyo cilmi-baaris.
Ma walwaleysaa, ma cabsaneysaa, oo walbahaar miyaa ku haya? Waxaad sameyn kartaa inaad sameyso waxaad kula tacaasho! Halkan waxaad ka heli doontaa Layli nasiino oo aad sameyn karto noloshaada maalinlaha ah.
SIDEE LOO WAJAHAA CORONAVIRUS NOLOSHA MAALINLAHA AH?
Safmarka Coronavirus wuxuu saameynayaa nolosheenna maalinlaha ah. Baahintan Af-Soomaaliga ah waxay ku saabsan tahay sida aan noloshan cusub ugu wajahi karno si togan.
SABABAHA CABSIDA IYO SIDA LOO MAAREEYO INTA UU (Somali)
Maxaan u cabsannaa? Sidee dadku siyaabo kala duwan uga falceliyaan cabsida, iyo sidee ayaan uga kaban karnaa cabsida COVID-19? Su'aalahan ayaan baahintan uga hadleynaa, jawaabo Af-Soomaali ah ayaana ka bixin doonnaa.
Albatros gemeinnützige Gesellschaft
für soziale und gesundheitliche
Telefon: +49 (0) 30 319831 0
Telefax: +49 (0) 30 319831 111
© 2021 Albatros gGmbH